ဖြူဖွေးလှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိ လွန်း တဲ့ အတွင်းသားတွေကို ထုတ်ဖော်ပြ သလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် သဇင်ဦး – XB Media Myanmar
ဖြူဖွေးလှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိ လွန်း တဲ့ အတွင်းသားတွေကို ထုတ်ဖော်ပြ သလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် သဇင်ဦး
ပရိသတ်ကြီးရေ sexyမော်ဒယ်လ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို စတင် ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူလေးကတော့ သဇင်ဦး ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အပြည့် အဝရရှိထားပြီး အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာကို သိမ်းပိုက် ထား နိုင်တဲ့ သူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်……။
ဒါ့အပြင် သဇင်ဦးက တောင့်တင်းလှပတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သူမတူ တဲ့ ဖက်ရှင်အလန်းစားလေးတွေကို လိုက်ဖက်ညီစွာ ဝတ်ဆင်တက်သူဖြစ်လို့ ပုရိသတို့ အ သည်းစွဲအားပေးချစ်ခင်ရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဆိုရင်လည်း မမှားနိုင်ပါဘူးနော် ။ သဇင် ဦးက လတ်တလောမှာတော့ photo shooting တွေကို ရိုက်ကူးနေပြီး သူမရဲ့ ပုံတွေကလ ည်း လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်မှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များနေတာလည်း ဖြစ်ပါတ ယ်…. ။
ယခုမှာလည်း မော်ဒယ်လ် သဇင်ဦး က အပြာရောင်မြန်မာဝတ်စုံဖက်ရှင်လေးနဲ့ အချိုးအ စား ကျကျလှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ပေးလါတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်အချစ် တော် မလေး သဇင်ဦး ရဲ့ ပုံလေးတွေတိုင်းက ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ အလှတွေပိုနေတာကြောင့် ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရင်း အချစ်ပိုနေမှာ အသေအချာပဲမို့ ပြန်လည်တင် ဆက် ပေး လိုက်ပါတယ်နော်..။ သူမရဲ့ ပုံလေးတွေကို ကြည်ပြီး ပရိသတ်ကြီးက အသည်းလေးတွေပေးခဲ့ဖို့ မမေ့လိုက်ပါနဲ့အုန်းနော်…… ။
Source & Photo credit – Ei Sabal Phyu’s facebook account ,Refernece&Credit:MMLoad.com
ပရိသတ္ႀကီးေရ sexyေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အႏုပညာေလာကထဲကို စတင္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ေတြရဲ့ အခ်စ္ကို အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ သူေလးကေတာ့ သဇင္ဦး ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ့ ႀကိဳးစားမွုေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးမွုကို အျပည့္ အဝရရွိထားၿပီး အခ်ိန္ခဏေလးအတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္မွုေတြမ်ားစြာကို သိမ္းပိုက္ ထား နိုင္တဲ့ သူေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္……။
ဒါ့အျပင္ သဇင္ဦးက ေတာင့္တင္းလွပတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာ အခ်ိဳးအစားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး သူမတူ တဲ့ ဖက္ရွင္အလန္းစားေလးေတြကို လိုက္ဖက္ညီစြာ ဝတ္ဆင္တက္သူျဖစ္လို႔ ပုရိသတို႔ အ သည္းစြဲ အားေပးခ်စ္ခင္ရတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးဆိုရင္လည္း မမွားနိုင္ပါဘူးေနာ္ ။ သဇင္ ဦးက လတ္ တေ လာမွာေတာ့ photo shooting ေတြကို ရိုက္ကူးေနၿပီး သူမရဲ့ ပုံေတြကလ ည္း လူမွုကြ န္ယက္ စာမ်က္ႏွာထက္မွာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားေနတာလည္း ျဖစ္ပါတ ယ္…. ။
ယခုမွာလည္း ေမာ္ဒယ္လ္ သဇင္ဦး က အျပာေရာင္ျမန္မာဝတ္စုံဖက္ရွင္ေလးနဲ႔ အခ်ိဳးအ စား က်က်လွပေနတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကို တင္ေပးလါတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္အခ်စ္ ေတာ္ မေလး သဇင္ဦး ရဲ့ ပုံေလးေတြတိုင္းက ဆြဲေဆာင္မွုရွိရွိ အလွေတြပိုေနတာေၾကာင့္ ခ်စ္ရတဲ့ ပရိသတ္ေ တြ ၾကည့္ရင္း အခ်စ္ပိုေနမွာ အေသအခ်ာပဲမို႔ ျပန္လည္တင္ ဆက္ ေပး လိုက္ပါတယ္ေနာ္..။ သူမရဲ့ ပုံေလးေတြကို ၾကည္ၿပီး ပရိသတ္ႀကီးက အသည္းေလးေတြေပးခဲ့ဖို႔ မေမ့လိုက္ပါနဲ႔အု န္းေနာ္…… ။
Source & Photo credit – Ei Sabal Phyu’s facebook account